China HuoXiangZheng Qi Wan ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | HEX
Patchouli, Perilla ရွက်များ၊ Angelica dahurica၊ Atractylodes macrocephala (လှုပ်ခါ)၊ လိမ္မော်ခွံ၊ Pinellia (လုပ်)၊ Magnolia (ဂျင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော)၊ Poria, Platycodon, licorice, pot belly, jujube, ginger ။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - မရှိ
ဒီထုတ်ကုန်ဟာအညိုရောင်အာရုံစိုက်ဆေးလုံးဖြစ်တယ်။ မွှေး, မွှေးနှင့်အနည်းငယ်ခါးသော။
၃။ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးများသို့မဟုတ်အခြားကုသမှုခံယူနေသောပြင်းထန်သည့်နာတာရှည်ရောဂါများရှိသည့်လူနာများကိုဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားမှုဖြင့်ယူသင့်သည်။
4. ဆေးကိုသောက်ပြီးသုံးရက်အကြာတွင်၊ ရောဂါလက္ခဏာများမတိုးတက်ပါ၊ သို့မဟုတ်အော့အန်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းတို့သည်ထင်ရှားပြီးအခြားလေးနက်သောလက္ခဏာများကိုဆေးရုံသို့သွားသင့်သည်။
5. အသုံးပြုမှုနှင့်သောက်သုံးသောအရယူပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေသောကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအား၎င်းကိုဆရာဝန်၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ယူသင့်သည်။
၁၀။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤပစ္စည်းကိုကလေးများလက်လှမ်းမမီအောင်သိမ်းထားပါ။
နောက်တစ်ခု: Gan Mao Ling (ရုပ်ရှင်ကားဖြင့်တက်ဘလက်)